I-VIRURL: Umxholo oxhasiweyo kunye nokwabelana ngeNtlalontle | Martech Zone
I-VIRURL: Umxholo oxhasiweyo kunye nokwabelana ngeNtlalo
NgeCawa, ngo-Novemba 25, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Siyayihlawula into yokuhanjiswa komxholo kwaye sihlawulela iintengiso ngaphandle nangaphambili. Kubalulekile ukufumana umxholo wethu phambi kwabaphulaphuli abaninzi-kwaye sifumanisa ukuba ukubekwa kwindawo ekumgangatho ophezulu kusizisela iindwendwe ezintle, ezifanelekileyo ezifanelekileyo ezinamathelayo. Njengokuba i-Facebook inyusa ukunyuselwa okuhlawulelweyo, uGoogle uyaqhubeka nokuncipha izindlu nomhlaba, kwaye iinjini zokukhangela ziyaqhubeka nokulwa amaqhinga avela kubaqeqeshi be-SEO abakhohlisayo, ababoneleli bokuqukethwe bafumana ikona ukuze babhatale nje ngokudlala ngeendlela ezincinci kakhulu.
Kuyaphoxa kum ukutsho. Ndiyayithanda inkululeko yedemokhrasi ye-Intanethi kunye namandla ayo okuvelisa iziphumo kumfana omncinci ongenakho ukubanakho ukuya entloko nentloko nokhuphiswano olukhulu. Namhlanje, kusenokwenzeka ukuba inkampani encinci iyenze ibe nkulu kwi-Intanethi- kodwa njengoko iipropathi ze-Intanethi zijonga ukwenza imali ngalo lonke ithuba, loo mathuba ayancipha kwaye itoni ehlawulwa ngakumbi yokunyusa amathuba iyenyuka.
IVIRURL sisicwangciso esiliqili esahlukileyo. Endaweni yokuhlawula ezi zibonelelo ukukhuthaza ulwazi lwakho, i-VIRURL yongeza ithuba lokuba nefuthe ekuhlaleni ukuze bahlawulwe ukuze babelane ngamakhonkco abo.
I-VIRURL isasaza amanqaku axhaswayo kunye neevidiyo ezijikeleze iwebhu ngewebhusayithi ezidumileyo kunye nabantu abanempembelelo. Iqonga lethu lokuzisebenzela livumela abavelisi bemithombo yeendaba kwi-Intanethi ukuba benze imikhankaso yentengiso yemveli kwimeko yokuchofoza. Iintengiso zeVIRURL zidityanisiwe kuthungelwano lwethu olukhulu nolukhulayo lwabapapashi bewebhusayithi kunye nabasasazi beendaba zentlalo, bekhulisa umxholo weqabane kwizigidi zabantu abazinikele kakhulu.
Umxholo weVIRURL oxhasiweyo udityanisiwe ngokwamaqela amabini abasebenzisi:
Abapapashi bewebhusayithi, ababamba iwijethi yeVIRURL kwindawo yabo ukulungiselela abaphulaphuli babo ngemixholo efanelekileyo exhaswe kwinethiwekhi yeVIRURL.
Abashukumisi bezentlalo, ababelana nge-VIRURL amakhonkco kunye nabalandeli babo beendaba zosasazo abazinikeleyo kunye nabafundi bebhlog. I-VIRURL ibanga ukuba ine-110,000 yempembelelo ezisayiniweyo.
Qaphela: Sivavanya iVIRURL kwaye sisebenzise ikhonkco lethu elixhasiweyo kwesi sithuba.
tags: uthandile uthandileukuhlawulwa kwakhonaUkwabelana okuhlawulelweyoiimbono ezihlawulwayoyenyani
Yongeza uHlelo-lweNdawo kuyo nayiphi na iNkqubo yoLawulo loMxholo
Isinyathelo sokuqala kwiShishini loLuntu: Ukufumanisa
Novemba 25, 2012 ngo-11: 26 PM
Enkosi kwintshayelelo yakho yeVIRURL.